Faah-faahin: Laba qarax oo ruxay Baydhaba (Yuu ahaa bartilmaameedka?) - Caasimada Online
Home Warar Faah-faahin: Laba qarax oo ruxay Baydhaba (Yuu ahaa bartilmaameedka?)
Faah-faahin: Laba qarax oo ruxay Baydhaba (Yuu ahaa bartilmaameedka?)
Baydhaba (Caasimada Online) – Faah-faahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa, Laba qarax oo waa weyn oo isku mar dhacay oo abaare 5:30 galabnimo ruxay magaalada Baydhaba ee xarunta gobolka Baay, sida ay goobjoogeyaal u xaqiijiyeen Caasimada Online.
Labada qarax ayaa mid waxa uu ka dhacay meel ku dhow Hotel-ka Bilan, halka qaraxa labaad uu ka dhacay bannaanka maqaayadda Badar. Labada goob ee qaraxa uu ka dhacay ayaa waxay isku jiraan qiyaastii 5km. Qaraxyada kadib ayaa la maqlay rasaas culus oo dhaceysa.
Warar aan ka helnay ilo-wareedyo dhinaca ammaanka ah ayaa sheegaya inay u malaynayaan in labada qaraxba ay ahaayeen kuwa is-miidaamin ah.
Warar hordhac ayaa sheegaya in Afar ay ku dhinteen qaraxa ka dhacay hotel Bilan, kuwaasi oo dhammaantood ahaa shacab.
Magaalada Baydhaba ayaa xarun KMG ah u ah maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ee uu hoggaamiyo Shariif Xasan Sheekh Aadan, oo caasimaddiisa ay tahay magaalada Baraawe.